सल्यान खबर डेस्क २०७७ फाल्गुण १६ गते आइतबार १६:३५:१२ मा प्रकाशित
सल्यानका महिलाले वार्षिक ३७ मृत शिशुको जन्म दिने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३७ जना शिशु मृत जन्मिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्याल सल्यानले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५३ , आ.व. २०७५/०७६ मा ५७ र आ.व. ०७६/०७७ मा ३७ जना शिशु मृत्त जन्मिएका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी थलराज डिसीका अनुसार विगतका आर्थिक वर्षहरु भन्दा केही सुधारोन्मुख भएपनि मृत्युदर बढी नै हो ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको चार पटकको नियमित गर्भ जाँच, लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लाग्नु लगायतका कारण आमाले मृत्त शिशुलाई जन्म दिइ रहेको उनले बताए । उनले भने आर्थिकवर्ष२०७५/०७६ मा झनै ५७ जना मृत्त शिशुके जन्म भएको थियो । तर गएको आ.व.मा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत २० प्रतिशतले घटाउन सफल भएका छौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी नआएको भए अझै घटाउन सकिन्थ्यो होला ।